Ungayisusa kanjani i-Akhawunti ye-Instagram? - Komphakathi
Ungayisusa kanjani i-Akhawunti ye-Instagram?
Ngabe ufuna ukuthatha ikhefu kusuka ku-Instagram bese ugxila kuwe?Kepha awazi ukuthi uyisusa kanjani i-akhawunti yakho ku-Instagram. Ungakhathazeki, futhi sikulungiselele okuthunyelwe okuphelele okuzokuqondisa ezinyathelweni zokuthi ungayisusa kanjani ngempumelelo i-akhawunti yakho ye-Instagram.
Noma uma ungasusi i-akhawunti yakho ye-Instagram, sibuye sabala enye indlela eyodwa yokuphumula ku-Instagram lapho ungavimbela khona i-akhawunti yakho ye-Instagram okwesikhashana.Nikeza lokhu okuthunyelwe kufundwa ngokugcwele ukuze wazi izinyathelo zokususa i-akhawunti yethu ye-Instagram.
Izinyathelo Zokususa i-Akhawunti ye-Instagram:
Ukususa i-Instagram kulula kakhulu, futhi ngeke uzizwe ulahlekile uma ulandela nathi. Sishilo isinyathelo ngasinye esidingekayo ukususa i-akhawunti ye-Instagram unomphela. Manje ake sibone ukuthi yiziphi izinyathelo ezidingekayo ukususa i-akhawunti ye-Instagram.
Vakashela iwebhusayithi esemthethweni ye-Instagram ngokuchofoza lapha .
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Instagram ngokusebenzisa imininingwane yakho yomsebenzisi. Sizokuncoma ukuthi ungene ngemvume kusuka ku-PC yakho ngoba awukwazi ukususa i-akhawunti yakho ku-Instagram mobile App.
Uma usungene ngemvume ku-akhawunti yakho ngokuhlukile chofoza lapha.
Lapho usuvule isixhumanisi esingenhla, uzoba nekhasi elizokubuza isizathu sakho sokususa i-akhawunti yakho ye-Instagram. Ungasho isizathu sakho sokususa i-akhawunti yakho.
Ngemuva kokusho isizathu sakho sokususa i-akhawunti yakho manje kuzofanele ufake iphasiwedi yakho ye-Instagram ukuqinisekisa nokuqinisekisa ukunqanyulwa kwe-akhawunti yakho.
Ngemuva kokufaka iphasiwedi yakho manje kuzofanela uchofoze ku-'Permanently Delete my account 'ukuze ususe i-akhawunti yakho. Uma usuqedile i-akhawunti yakho izosuswa ku-Instagram.
Ngemuva kokulandela lezi zinyathelo i-akhawunti yakho izosuswa ngempumelelo ku-Instagram. Kepha kungahle kube nezinto ezithile okudingeka uzinakekele ngaphambi kokuthi ususe i-akhawunti yakho ye-Instagram. Manje esigabeni esilandelayo seposi, sizoxoxa ngezinto ezimbalwa okudingeka uzicabangele ngaphambi kokususa i-akhawunti yakho.
5 Kuhle iMovie Ezinye izindlela
Ungayikhubaza kanjani i-akhawunti yakho ye-Instagram okwesikhashana?
Ukukhubaza i-akhawunti yakho ye-Instagram okwesikhashana, ungalandela lezi zinyathelo ezilula futhi ufihle umsebenzi wakho okwesikhashana uze uzizwe ulungile ukubuya.
Ngena ku-akhawunti yakho ngokusebenzisa imininingwane yakho yomsebenzisi.
Lapho usungenile ngemvume chofoza kusithombe sakho sephrofayela ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini sakho, lapho kuzokhethwa khona ibha yokukhetha.
Manje chofoza kuthebhu ethi 'Izilungiselelo' ukuze ungene kulungiselelo lwe-akhawunti yakho.
Uma usungene kuzilungiselelo ze-akhawunti yakho, skrolela ezansi ukuze uthole 'Okwesikhashana khubaza i-akhawunti yami'. Manje chofoza kulokho ukuthola ikhasi lokuqinisekisa.
Manje, uma usekhasini lokuqinisekisa, faka isizathu esisho ukuthi kungani ufuna ukukhubaza i-akhawunti yakho bese ufaka iphasiwedi yama-akhawunti akho ukuqinisekisa ukukhubaza i-akhawunti yakho.
Uma usuqedile skrolela phansi bese uqhafaza ku-'Khubaza i-akhawunti yami okwesikhashana 'ukuqedela inqubo yakho
Uma usulandele lezi zinyathelo, i-akhawunti yakho izokhutshazwa okwesikhashana uze uzizwe ulungile ukubuya ku-Instagram.
Izici okufanele uzicabangele ngaphambi kokususa i-akhawunti yakho ye-Instagram:
Ngaphambi kokuthi ususe i-akhawunti yakho ku-Instagram, cabanga ngalezi zinto ukuze ungaphuthelwa yilutho.
Uma ususule i-akhawunti yakho, ngeke uze ukwazi ukusebenzisa i-akhawunti yakho futhi ngegama lomsebenzisi elifanayo kuze kube yilapho umuntu othile engasebenzisi igama lomsebenzisi elifanayo nelakho.
Ngemuva kokususa ngeke ukwazi ukufinyelela izithombe zakho, izindaba, nezingxoxo. Yonke idatha yakho izosuswa. Ukugwema ukulahlekelwa noma yiziphi izithombe zakho noma enye idatha, ungazigcina kudivayisi yakho noma uthathe izithombe-skrini zezingxoxo zakho.
Uma i-akhawunti yakho iyi-akhawunti yebhizinisi, ngeke usakwazi ukuphromotha ibhizinisi lakho, futhi zonke izici ze-akhawunti yebhizinisi zizomiswa.
Uma ungafuni ukuthi kwenzeke noma yini kulezi zinto futhi kepha usafuna yonke into ye-akhawunti yakho ungakhubaza i-akhawunti yakho okwesikhashana ukuze ube nakho konke okuku-akhawunti yakho futhi usafihlwa. Manje sesizobona izinyathelo zokuthi ungakhubaza kanjani i-akhawunti yakho engxenyeni elandelayo.
Ngakho-ke lezi bekuyizinyathelo zokuthi ungayisusa kanjani ngempumelelo i-akhawunti yakho ye-Instagram. Sithemba ukuthi uyithandile, futhi ukwazile ukususa i-akhawunti yakho ye-Instagram ngemuva kokufunda lokhu okuthunyelwe. Zizwe ukhululekile ukwabelana ngempendulo yakho esigabeni sokuphawula ngezansi.
I-WhatsApp vs Signal - Yikuphi Okufanelekile?
Izibalo ze-YouTube namaqiniso (2020)
I-WhatsApp Group Links - Dala, Yabelana futhi Uthumele
Ungawuthola Kanjani Umlilo Wamahhala ku-PC?
Ungasithola Kanjani Isaphulelo Somfundi seHulu ngo-2020?
Amakhodi Wokukhuthaza we-YouTube TV - Disemba 2020
Ungayibona Kanjani i-Fake AirPods Pro? Ingabe Kufanele Uthenge Noma Ungathengi?
Ungayibuka Kanjani i-YouTube ku-TV?
Ungayisebenzisa Kanjani i-Alexa App ku-PC?